5 Plugins Maareynta Waxtarka leh ee Mareegtaada WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/5 Plugins Maareynta Waxtarka leh ee Mareegtaada WordPress
5 Plugins Maareynta Waxtarka leh ee Mareegtaada WordPress
Haddii aad rabto inaad ganacsi si guul leh u maamusho, waxaad u baahan tahay xidhiidh cad oo heer kasta ah oo ka dhex jira xubnaha kooxdaada. Maaraynta habaysan iyo isgaadhsiin dhisan ayaa ah habka ugu wanaagsan ee aad ku guulaysan karto. Hagaag, waa wax fiican in ay jiraan qalabyo kala duwan oo online ah oo dadku isticmaali karaan si ay u fududeeyaan socodka shaqada qaarkood. Kuwaas waxaa ka mid ah plugins WordPress kuwaas oo si fiican ula mid ah dhammaan goobaha, taas oo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay hagaajiyaan hababka maaraynta si wax ku ool ah.
Ka bilow xaqiiqda ah in WordPress uu awood u leeyahay saddex meelood meel internetka. Taasi waxay ku tusinaysaa sida ay u awood badan tahay WordPress sida nidaamka maareynta nuxurka. Waa kuwan shanta ugu waxtarka badan ee maareynta mareegahaaga.
Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonaa sifooyinka kala duwan ee qalab kasta si uu kaaga caawiyo inaad hesho xalka ugu fiican ee baahiyaha kala duwan. Aan bilowno!
La xiriirida macaamiisha ama maareynta mashruucyo badan waxay noqon kartaa caqabad culus haddii aadan aqoon sida loo habeeyo maskaxdaada iyo goobta shaqada. Nasiib wanaag, waxaa jira guddiyo maamul hawleed badan oo faa'iido leh sida ProjectPanorama iyo Kanban Boards.
Aynu ka hadalno plugin Kanban Boards ah. Waxay leedahay sifooyin la mid ah kan caanka ah ee Trello. Qalabkani waxa uu kuu ogolaanayaa inaad samayso liisaska ama hawlaha aad samayso oo aad u dhexayso guddiyo kala duwan si aad ula socoto horumarka. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si aad u xakamayso xaaladda macaamiisha, habka iibka, iyo wax ka badan. Kaliya ku rakib looxa boggaaga WordPress oo isticmaal furkan bilaashka ah oo fudud si aad u maamusho dhammaan shaqaalahaaga, mashaariicda, macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha, ama iibiyeyaasha.
Ma rabtaa in aad ku darto jadwal shaqaynaya WordPress? Ka dib la kulan Google Calendar plugin - mid bilaash ah oo loogu talagalay kuwa jecel xalalka fudud. Qalabkan dareenka leh wuxuu shaqeeyaa iyada oo aan si adag loo dhigin, si aad si dhakhso ah u maareyso dhacdooyinka kala duwan.
Codsigan waxa lagu soo saaray sifooyin cajiib ah. Waxaad ka hubin kartaa tilmaan-bixiyahan si aad u barato sida Google Calendar loogu dhex daro boggaaga WordPress adoo isticmaalaya plugin. Ka dib markii la soo dejiyo oo ku rakibo qalabkan boggaaga, waxaad abuuri kartaa dhacdadaada ugu horreysa dhowr daqiiqo gudahood. Iyo awooda lagu xakameynayo jadwalkaaga adoo isticmaalaya tags waxay u ogolaan doontaa kooxda inay helaan macluumaadka la xiriira iyaga oo aan kala shaandheyn qoraalada toddobaadka ah. Qalabkani wuxuu bixiyaa wax badan oo dheeraad ah, markaa waa inaad tijaabisaa!
Weligaa ma rabtay in ka badan qoraallada iyo boggaga WordPress? Qalabka maaraynta saxda ah wuxuu ogolaanayaa wanaajinta socodka shaqada, markaa aan ka dhigno shaqadaada mid waxtar leh. PublishPress waa plugin kale oo awood badan oo maamulka WordPress ah oo ku habboon isticmaaleyaasha horumarsan iyo kuwa bilowga ah.
Waxay ka kooban tahay qalab ay dadku u baahan yihiin inay si guul leh u maareeyaan nuxurka WordPress. Waxaad isticmaali kartaa jadwalka tifaftirka si aad ugu qorsheysato waxa ku jira goobta ama aad u samayso ogeysiisyo iyo heerar gaar ah dhammaan cusboonaysiinta macluumaadka.
Waxaad si wax ku ool ah ula kaashan kartaa plugin this, oo waxay si fiican u dhexgalaan WordPress kaaga. Tani waxay ka dhigaysaa PublishPress xalka ugu fiican ee shabakad kasta oo leh isticmaaleyaal badan.
Fiiri dib u eegistayada si aad wax badan uga ogaato sababta PublishPress u noqon karto plugin-ka aad raadineysay.
Haddii aad bixiso adeegyo oo aad qabanqaabiso kulammo macaamiisha, markaa waxaad ogtahay sida ay u adag tahay in la abaabulo kulan waqti ku habboon labadiinaba. Halkii aad si buuxda ugu tiirsanaan lahayd taleefanka iyo iimaylka ballamaha macaamiisha, waxaad isticmaali kartaa plugin si aad tan u sameyso, ama waxaad ka eegi kartaa plugins dheeraad ah halkan.
Balamaha+ plugin waxaa horumariyay xirfadle si aad si toos ah uga maamuli karto jadwalka dashboardkaaga WordPress. Tani waa faa'iido weyn marka loo eego adeegyo kale oo badan. Ballamo Sidoo kale, aad bay u fududahay in la dhejiyo jadwal ama foom ballansan labada adeeg bixiyayaasha iyo macaamiisha si ay u arkaan dhammaan ballamaha.
Ku darida adeegyada Google waa lama huraan sababtoo ah waxay ku qalabayn kartaa goobtaada waxqabad dheeri ah. Markaa aan u jeedsanno fiiro gaar ah G Suite plugin. Waxaa si toos ah u sameeyay kooxda Google waxayna ka kooban tahay abka mareegaha waxtarka leh sida dukumentiyada elektarooniga ah, iimaylka, xaashida xaashida, iyo in ka badan.
Waxaad ku badbaadin kartaa qandaraaslayaasha IT-ga, shatiyada rasmiga ah, iyo wax ka badan oo sidaas ah. Laakiin waxaa ka sii muhiimsan, G Suite wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho magac domain oo wata ciwaannada iimaylka ee saxda ah gudaha Gmail. Isticmaalayaasha WordPress ayaa aad uga faa'iideysta nidaamka maaraynta macluumaadka shuraakada Google.
Way adag tahay in la rumaysto inay jiraan in ka badan 56,000 plugins oo ku taxan Hagaha Plugin-ka ee rasmiga ah. Marka la eego hantida plugins ee la heli karo, waxaad dooran kartaa wax kasta oo aad rabto. WordPress waa goob wax ku ool ah, iyo noocyo badan oo plugins ah oo ay taageerto WordPress waxay la macno tahay inaad u habayn karto baahiyahaaga ganacsi (iyadoon loo eegin nooca ganacsiga).
Soo deji oo rakib qalabka maaraynta wax ku oolka leh ee lagu xusay maqaalkeena oo ka dhig ganacsigaaga inuu u qabto si ka wanaagsan sidii hore. Waxaan fileynaa in qalabkani ay noqon doonaan wax ku kordhinaya socodka shaqadaada aad taqaan.
Google wuxuu xaqiijiyay arrimo tusmeynaya oo keenaya xoogaa natiijooyin fadhiid ah
Keydi dukumeenti bogag ah oo laga furi karo Microsoft Word [Pro tip]